Trafika andramena tany Singapour : nohafahana ny voampanga, ho mafy ny sazin’i Madagasikara | NewsMada
Trafika andramena tany Singapour : nohafahana ny voampanga, ho mafy ny sazin’i Madagasikara
Nahazo loharanom-baovao ny filohan’ny vovonana Alliance voahary gasy (AVG), Razakamanarina Ndranto, fa nohafahan’ny fitsarana any Singapour ny voampanga, Wong Wee Keong, mikasika ny trafika andramena miisa 30.000. Afaka mampiakatra ny raharaha any amin’ny fitsarana ambony anefa ny mpitory, ny fampanoavana any Singapour. Nomarihin’ny filohan’ny AVG fa mety ho afaka roa na telo herinandro vao tena tokony hivoaka ny didim-pitsarana ofisialy. Na izany aza, ho azy, raha io tokoa ny didy navoakan’ny fitsarana any Singapour, vao mainka manamarina fa “tsy nandray ny andraikitra tandrify azy ny fanjakana malagasy”. Nanamafisany an’izany ny tsy fahavitan’ny fitondrana eto Madagasikara nanaraka ny fepetra napetraky ny Rafitra iraisam-pirenena mitantana ny varotra iraisam-pirenena ny zavamaniry sy ny biby ahina ho lany tamingana (Cites).
Nitohy ny trafika taty aoriana
Nambaran’ny filohan’ny AVG fa “fepetra telo no tena takin’ny Cites mila tanterahin’ny fanjakana Malagasy. Voalohany, ny fanisana ireo tahiry andramena. Raha ny antontam-baovao any am-pelatanan’ny AVG, ny 10%-n’ireo andramena ihany no vita, izany hoe, bolabola 28.600 nogiazan’ny fanjakana, raha 270.000 ny nambara. Faharoa, nitaky ny Cites ny tsy hisin’ny trafika andramena intsony nanomboka ny taona 2014. Ny zava-nisy anefa, nitohy ny fanondranana an-tsokosoko, toy ireo bolabola andramena 7.000 tratra tany Hong Kong ny volana oktobra 2015. Teo koa ny fivoahan’ny andramena tany Sainte-Marie ary mbola nisy hafa koa ny tamin’ity taona 2016 ity. Fahatelo, mitaky ny hampiharana ny lalàna ny Cites, fa tsy mionona amin’ny famoahana lalàna. Santionany hanamarinana izany, ny Raharaha Bekasy”, efa nanambaran’i Etazonia hampiharana ny sazy azy io. Famoahana lalàna fotsiny koa ny fikasan’ny fanjakana mikasika ny fandikàna lalàna amin’ny lafiny toekarena, fa tsy misy mihitsy ny fampiharana.
Tsy nisy voasazy na iray aza
Raha fintinina, manamafy ny filohan’ny AVG, fa “vao mainka ho mafy ny sazin’i Madagasikara hampiharin’ny Cites, hivoaka amin’ny septambra ho avy izao”. Ao anatin’izany ny tsy fahafahantsika manondrana any ivelany ny andramena sy ny zavamananaina ahina ho lany tamingana. Ao anatin’izany ny sokatra, izay tsy mbola nisy mpanao trafika, na iray aza, nosazina sy nampiharana ny sazy henjana. Manampy ireo, tsy nisy voasazy koa ny mpanondrana soavalindriaka. Tsiahivina fa anisan’ny nanasazian’ny Cites an’i Madagasikara voalohany ny tsy fahafahana manondrana ny zava-bita amin’ny hodi-boay, mampijaly ny mpanao asa tanana malagasy.
Niarovan-tenan’ny voampanga, Wong Wee Keong ny hoe: “ara-dalàna ny taratasy mikasika ireo andramena satria tsy tao anatin’ny fotoana nandrarana ny fanondranana any ivelany (13 aogositra 2013-13 febroary 2014) ny nitondrana ireo andramena (14 febroary 2014). Ny 26 febroary 2014 vao nivoaka ny fanohizan’ny Cites ny fandraràna fanondranana any ivelany.